Maraykanka, 01 November 2016
Talaado 1 November 2016
Ilhan oo Guul ka Filaysa Doorashada Maraykanka
Ilhan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah ayaa 8 maalin kadib qarka u saraan in ay noqoto gabadhi ugu horreysay oo Muslim, muhaajir Mareykan ah oo noqota xildhibaan.
Dimoqraadiyiinta oo Ka Walaacsan Go'aanka FBI-da
Xisbiga Dimoqraadiga dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay go,aanka Hey’ada Mukhaabaraadka Gudaha Mareykanka ee FBI-da ay dib ugu baareyso email-ada Hillary Clinton mid siyaasadeysan.
Soomaalida Ohio oo la Kulmay Siyaasiyiin Maraykan ah
Jaaliyadda Soomaliyeed ee ku nool Gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Colombus oo ka mid ah meelaha ay Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin dalkan Maraykanka ayaa kulan la yeeshay dhammaan murshaxiinta ka qayb galaysa doorashada sanadkan
Waa Maxay Codeynta Horu-dhaca ah ee Doorashada Mareykanka?
Doorashada Mareykanka waxa ay dhacdaa 8da bisha November 4 sanaba mar. Waxaysedadka Codeynaya fursad u heystaan in ay codkooda sii dhiibtaan bisha ka hor maalinta codeynta.
Shir looga hadlay Islaam Naceybka oo Ka Dhacay Minnesota
Waxaa magaalda Miniapolis ee gobolka Minnesota xalay lagu qabtey kulan ay ka qeybgaleen heyadaha amaanka iyo cadaalda Mareykanka iyo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Maxkamad Mareykan ah oo Danbi Ku Heshay Haween Soomaali-Mareykan ah
Maxkamad federaali ah oo ku taallo dalkan Mareykanka ayaa xukmisay in ay danbiilayaal yihiin laba haween oo Soomaali-Mareykan ah kuwaas oo ku eedeesnaa in ay lacago u aruuriyeen ururka Al-Shabaab.
Warbixin Doorashada Mareykanka iyo Doorka Soomaalida
Soomaali aad u badan aayaa ku nool dalkan Mareykanka, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay sanadkan codeyn doonaan.
Clinton & Trump oo Isku Diyaariyanaya Dooddoodii 3-aad
Musharrixiinta xisbiyada Dimuqraaddiga iyo Jamhuuriga ee kala ah Hillary Clinton iyo Donald Trump, ayaa ku guda jira saacadihii ugu dambeeyay ee u diyaar garowga dooddooda seddaxaad, taas oo ah tii ugu dambeysay ee labada musharrax ay yeelanayaan ka hor doorashada guud ee 8-da November.
Wacyi-gilinta Caafimaadka ee Soomaalida Minnesota
Hay'adda Caafimaadka Briva oo ah Hay'ad ka shaqeysa wacyingelinta caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa shalay magaalada Minneapolis ku qabatay siminaar la xiriira caafimaadka.
Rag Qaraxin Rabay Soomaalida Mareykanka oo La Qabtay
Waaxda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in la xiray saddex nin oo Mareykan ah oo qorsheynayey in ay weeraraan masaajid iyo guryo ay dagan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalkaan Mareykanka.
Shirka Qurbajoogta Geeska Africa ee Washington
Waxaa magaalada Washington. DC ee caasimada dalka Mareykanka lagu soo gaba gabeeyey shir loogaga hadlayey doorka ay qurba-joogta Bariga Africa ee Mareykanka ka qaadan karaan horumarinta dalalkooda.